နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပီ ............ | မိုးဇက်
Posted on Thursday, 26 January 2012
“နှလုံးသားတစ်ခု၏စွတ်ကြောင်း ” ဘလော့ဟာ ဒီနေ့ဆိုရင် ( ၂ ) နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်တောင်ရောက်လာပါပီ ။ အားပေးကြတဲ့သယ်ချင်းတွေကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။ ဒီ “ နှစ်လုံသားတစ်ခု
၏စွတ်ကြောင်း ” ကိုအရင် www.mosesblack.blogspot.com အဖြစ်နှင့်စရေးဖြစ်တာပါ ၊ ပထမ စ ရေးဖြစ်တာက Black မြှောက်ပေးတာလဲပါတယ် ၊ ကိုယ်ကလဲ ခရီးခဏခဏသွားဖြစ်တော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေ တပွေ့တပိုက်နှင့်ဆိုတော့ ဝန်ပိုတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကဗျာလေးတွေကို ဆိုက်ဘာပေါ်တင်ထားတော့ အဆင်လဲပြေ ၊ မှတ်တမ်းတစ်ခု အဖြစ်လဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့ ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်လျှောက် ကျွန်တော့နှလုံးသားရဲ့ ခံစားမှုတွေအကြောင်းဖြစ်လို့ “နှလုံးသားတစ်ခု၏စွတ်ကြောင်း ” လို့ပေးဖြစ်တယ် ၊ ပထမတော့ သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ကွန်စုတ်ကြောင့် ကိုယ့်ဆိုက်ကို ကောင်းကောင်းမပြင်နိုင်ဘူး ၊ ဖြစ်သလိုပဲ ကိုယ့်ကဗျာလေးတွေ တင် ၊ ကိုယ့်ဘာသာဖက်ပေါ့ ။ သူများဆိုက်တွေတော့လည်ဖြစ်တယ် စာဖတ်ပြန်အဆင့်ပဲ ။ သူများဆိုက်မှာလဲ ကိုယ့်လင့်ကိုချိတ်ထားကြတာမရှိ ၊ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲမသိဘူး ကိုယ့်ဆိုက်ကို ၊ ဒါပေမယ့် အစ်မဂျက်စမင်းနှင့် အစ်မအိမ်ဂျယ်လှိုင်တို့က ဘယ်လိုရောက်လာတယ်မသိပါဘူး အမယ် အမာခံပရိသက်ကိုဖြစ်လို့ ........း) နောက်တော့ အဲ့ဆိုက်ကို ဟက်ခံထိသွားတယ် ( အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပါ ) ကျွန်တော့ဗျာ ဘယ်လိုမှကိုအဖက်ဆယ်လို့မရတော့ဘူး ၊ သယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းတော့လဲ သူတို့လဲ ကြိုးစားပေးပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဆိုက်ကို လုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတယ် ၊ ဒါနှင့် ကျွန်တော်လဲ လိုင်းတစ်လိုင်းကို အလျှင်အမြန်ဝယ် ၊ www.moses-black.blogspot.com ဆိုပီး အသစ်ပြန်ဖွင့်ရတယ် ၊ အကုန်အစကနေ ပြန်လုပ်ရတယ်ဗျာ............လိုင်းလေးရှိလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရလာတယ် ။ သူတို့ကအသေအချာကို လာဖတ်ပေးကြပါတယ် (သယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ ) ။ စကားမစပ် အမဂျက်တို့ အားပေးချက်ကတော့ တစ်ကယ်လက်လှန်တယ် ၊ တစ်ည ကျွန်တော် ....................... အဲ့ဝတ္ထုလေးကို တင်လိုက် မကြိုက်သေးလို့ စာလေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်လိုက်လုပ်နေတာ ပီးလဲပီးရော ကွန်မန့်တစ်ခုရောက်နေတယ် ၊ ကျွန်တော် ဖျားသွားတယ်း) ကိုယ်တောင်တင်မပီးသေးဘူး ဖတ်တဲ့လူကဖတ်ပီးကွန်မန့်တောင်ပေးပီးသွားတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်း) ကြည့်လိုက်တော့ အမဂျက် ၊ အားပေးတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်................း) ဒီလိုနှင့် “ နှလုံးသားတစ်ခု၏စွတ်ကြောင်း ” ဘလော့လေး ဒီနေ့တော့ နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လာပါပီ ၊ ဆက်လက်ပီး ကဗျာရေးလိုက် စာဖတ်လိုက် နှင့် ကျွန်တော် ဆက်သွားမယ်...............
ကျွန်တော်နှင့်မိုးဇက်သိတာကြာပါပီ ၊ ကျွန်တော်က ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ကယ်ကောင်းတာဖြစ်စေမယ့် ကိစ္စကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ၊ မျက်စိပိတ် နားပိတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့မက်ဆေ့လေးတွေကို အားလုံးသိစေချင်တယ် ၊ ဒီတော့ ညိုကြီး နှင့်ဘလော့စရေးဖြစ်ပါတယ် ( အမှန်က သူရေးတာပါ ကိုယ်က နည်းနည်းပါးပါးကူညီရုံပါ ) ၊ နောက်တော့ မိုးဇက်နှင့် တွဲပီး ဘလော့တစ်ခုလောက်ရေးဖို့ အကြံဖြစ်လာတာနှင့် သူ့ကိုဘလော့ရေးဖြစ်အောင်ပြောတော့ ၊ နှစ်ဦးသဘောတူ မိုးဇက်နှင့်ဘလက်ဆိုပီး လိပ်စာကိုသုံးလိုက်တာပါ ၊ သူလဲသူကြိုက်တဲ့ကဗျာ တင်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော့်ကိုလဲ အကောင့်ခွဲပေးထားတော့ ကျွန်တော်ထက်သန်ရာလေးတွေ တင်ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီလိုနှင့် သူ့ဘလော့လေးက နှစ်နှစ်တောင်ပြည့်ခဲ့ပါပီ ၊ နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ့် ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာက ကျွန်တော်တို့တွေဝင်ရေးတော့ သူ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိလာနေသောကြောင့် ခွဲပေးထားတဲ့ အကောင့်ကို ပြန်ပေးသင့်တယ် ။ ကိုယ်တင်ချင်တာလေးရှိရင် သူလဲသဘောကျရင်တော့ တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ၊
တစ်ခါတစ်လေ အနုပညာသမားတွေဟာ သူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ပေးထားရင် အနုပညာဇောင်းပိုထက်လာတယ်မို့လား ...........................
အဟဲ.....ကျွန်တော်ကတော့ မိုးဇက်တို့ ဘလက်တို့နှင့် ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်ပါ ၊ မိုးဇက်ဘလော့ရေးတယ် ကြားတော့ ကျွန်တော်လဲ နည်းနည်းကလိချင်တာနှင့် သူ့ကိုနည်းနည်း နက်ဆိုးကျလိုက်တာ အဟီး ကျွန်တော့ကိုအကောင့်တစ်ခု ခွဲပေးပါတယ် ။ ကျွန်တော်ပို့တော့ သိပ်မတင်ဖြစ်ပါဘူး ၊ စာတွေလိုက်ဖတ်ဖြစ်တာများတယ် ၊ ဘလော့ရပ်ဝန်းမှာ တစ်ချို့စာတွေ မြန်မာပြည် ဂရမ်ဒီ ရှိရင်ပေးလို့ရတယ် ၊ တစ်ချို့စာတွေက ကလေးတွေစာဖတ်လေ့ကျင့်လိုရတယ် ၊ အဟဲ............ဒီလိုနှင့်ပေါ့ဗျာ မိုးဇက်ရဲ့ ဘလော့က ဒီနေ့ နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပီ၊ ဟိုနေ့က သူ့မှာပြသနာတစ်ခုတတ်လို့ အသဲအသန်ဖြေရှင်းလိုက်ရတယ် ( ခုတော့အဆင်ပြေသွားပါပီ ) ၊ နက်ဆိုးဆိုပေမယ့် သူ့အတွက်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ၊ ဒါနှင့် ဒီနေ့ နှစ်နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ ဘလက်ပြောသလို အကောင့်ပြန်အပ်လိုက်တယ် ။ ဒါပဲ........
နက်ဆိုး ( Demon )
This entry was posted in anniversary by မိုးဇက်. Bookmark the permalink.
One thought on “နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပီ ............”
မာယာဖြူ on3December 2012 at 00:24 said:
လက်တို့ပီး ဖုန်းဆက်ခိုင်းတဲ့ ကဝေမလေးတစ်ကောင်